မြင့်မြတ် အကယ်ဒမီ မရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ထွက်ပေါ် - APANNPYAY
Home / သရုပ်ဆောင်များ / မြင့်မြတ် အကယ်ဒမီ မရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ထွက်ပေါ်
မြင့်မြတ် အကယ်ဒမီ မရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ထွက်ပေါ်
Apann Pyay 10:36 AM သရုပ်ဆောင်များ Edit
ပြီးခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီပေးပွဲညဟာ မြင့်မြတ်ပရိသတ်တွေအတွက် မချိတင်ကဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ညလို့ ပြောရင်ရပါတယ်။ သေချာပေါက် မြင့်မြတ်ရယ်လို့ အကယ်ဒမီမှန်းပေးထားတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ပရိသတ်တွေဟာ မှန်းချက်နဲ့လွဲခဲ့ရပြီးနောက် မြင့်မြတ်ဘာကြောင့် အကယ်ဒမီမရတာလဲဆိုတဲ့ ထင်ကြေး အမျိုးအမျိုးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။" မြင့်မြတ်ဘာလို့ အကယ်ဒမီ မရလဲ ?
အကောင်းဆုံးဇတ်ကားဆု - အုတ်ကြားမြက်ပေါက်
လို့စပြီး ကြော်ငြာလိုက်တော့
ကွီး မြင့်မြတ် မျက်နာပျက်သွားတာ မြင်လိုက်တယ် ။
မြင့်မြတ် အကယ်ဒမီ ဆုနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားက ခိုးဆိုးလုနိုက်ပါ။
အဲဒီဇတ်ကားက ဇကာတင်စရင်းထဲမှာ ပါမနေပါဘူး ။
မြင့်မြတ် အကယ်ဒမီ ဇကာတင်စရင်းထဲမှာ ပါနေတဲ့
ဇတ်ကားက " မှော်ကျောက်စာ " ပါ။
ခိုးဆိုးလုနှိုက်ဇာတ်ကားထဲက ဘယ်နှစ်ဆုရသလဲလို့ 
"ခိုးဆိုးလုနှိုက် "ဇာတ်ကား ဘာကြောင့်
အကယ်ဒမီ စရင်းထဲပါမလာလဲ ဆိုတော့
ကိုမြင့်မြတ်ကို အကယ်ဒမီနဲ့ မြင်ချင်ကြတဲ့ ပရ်တ်သတ်တွေ အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားကြတယ်။
ဒီညအတွက် ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါတယ် ကွီးမြင့်မြတ် " ရယ်လို့ပရိသတ်တစ်ယောက်ရဲ့ပြောကြားချက်ကို ကျန်တဲ့ပရိသတ်တွေကနေ ဝိုင်းဝန်းဖြန့်ဝေခဲ့ကြပါတယ်။
ပွီးခဲ့တဲ့ အကယျဒမီပေးပှဲညဟာ မွငျ့မွတျပရိသတျတှအေတှကျ မခြိတငျကဲဖွဈခဲ့ရတဲ့ညလို့ ပွောရငျရပါတယျ။ သခြောပေါကျ မွငျ့မွတျရယျလို့ အကယျဒမီမှနျးပေးထားတဲ့ မွငျ့မွတျရဲ့ပရိသတျတှဟော မှနျးခကျြနဲ့လှဲခဲ့ရပွီးနောကျ မွငျ့မွတျဘာကွောငျ့ အကယျဒမီမရတာလဲဆိုတဲ့ ထငျကွေး အမြိုးအမြိုးထှကျလာခဲ့ပါတယျ။" မွငျ့မွတျဘာလို့ အကယျဒမီ မရလဲ ?
အကောငျးဆုံးဇတျကားဆု - အုတျကွားမွကျပေါကျ
လို့စပွီး ကွျောငွာလိုကျတော့
ကှီး မွငျ့မွတျ မကျြနာပကျြသှားတာ မွငျလိုကျတယျ ။
မွငျ့မွတျ အကယျဒမီ ဆုနိုငျတဲ့ ဇာတျကားက ခိုးဆိုးလုနိုကျပါ။
အဲဒီဇတျကားက ဇကာတငျစရငျးထဲမှာ ပါမနပေါဘူး ။
မွငျ့မွတျ အကယျဒမီ ဇကာတငျစရငျးထဲမှာ ပါနတေဲ့
ဇတျကားက " မှျောကြောကျစာ " ပါ။
ခိုးဆိုးလုနှိုကျဇာတျကားထဲက ဘယျနှဈဆုရသလဲလို့ 
"ခိုးဆိုးလုနှိုကျ "ဇာတျကား ဘာကွောငျ့
အကယျဒမီ စရငျးထဲပါမလာလဲ ဆိုတော့
ကိုမွငျ့မွတျကို အကယျဒမီနဲ့ မွငျခငျြကွတဲ့ ပရျတျသတျတှေ အတျောစိတျမကောငျးဖွဈသှားကွတယျ။
ဒီညအတှကျ ထပျတူဝမျးနညျးရပါတယျ ကှီးမွငျ့မွတျ " ရယျလို့ပရိသတျတဈယောကျရဲ့ပွောကွားခကျြကို ကနျြတဲ့ပရိသတျတှကေနေ ၀ိုငျးဝနျးဖွနျ့ဝခေဲ့ကွပါတယျ။